2013 Digital Pulse Ọmụmụ | Martech Zone
2013 Digital Pulse Ọmụmụ
Fraịde, Septemba 27, 2013 Fraịde, Septemba 27, 2013 Douglas Karr
Anyị na-azọpịa. Enweghị ọkachamara na ọzụzụ, usoro nhazi na usoro nhazi ahaziri iche, na omume ndị gbanyere mkpọrọgwụ na-emebi ndị na-ere ahịa n'oge a. Ngwaọrụ na teknụzụ na-agbanwe ma na-apụta kwa izu - mana ezughị. Nke a bụ isi ihe mere anyị ji malite Highbridge… Ndị ahịa anyị chọrọ mmetụ aka iji nyere ha aka ịga n'ihu ma tinyekwa aka na mmefu ego ha na-eme.
Achọpụtara ihe ndị dị n'isiokwu a site na ahụmịhe na-arụ ọrụ na ndị njikwa na ndị na-ere ahịa, nyocha nyocha nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị isi ahịa 200 (Akara Finch na Netplus Digital Pulse Study, August 2013), na usoro ajụjụ ọnụ a gbara ndị na-arụ ọrụ na mbara igwe a kwa ụbọchị na ụbọchị. Nchọpụta ahụ gosipụtara n'ụzọ doro anya na oge eruola ka ndị ahịa kwụsị ịme ka a na-achịkwa ihe niile. Ọganiihu ma ọ bụ ọdịda nke akara ha dabere na ya.
Kedu ihe ndị otu gị na-alụso ọgụ? Kedu ka ị si emeri nsogbu ndị a? Gụpụta na akụkọ Netplus maka mkpebi ha.
Tags: digital marketingọmụmụ ahịa ahịa dijitalụfinch ụdịnyocha ahịanyocha ahịagbakwunye
Onye na-elekọta mmadụ: 7,000 Social Influencers in Your Ready
Azụmaahịa Smarter IBM: Platform Social Analytics dị elu